Indlu yeSikolo esiDala
INdlu yeSikolo esiDala yipropathi edwelisiweyo eme kumbindi welali. Owayesakuba likhaya lenqununu yesikolo esidala seGrammar eselumelwaneni ngoku elivulelwe uluntu njengemyuziyam. Le ndlu yeyona inkulu kule lali. Isetyenziswa kakhulu njenge-B&B entle ivulelwe iindwendwe ezizenzela ukutya kwiiveki ezikhethiweyo unyaka wonke.
Iveranda ikhokelela kwiholo enkulu yokungena. Ekhohlo kukho igumbi lokuphumla elinomtsalane elinesitovu esibaswa ngamaplanga, iisofa zesikhumba, iFlatscreen TV, ifreeview & DVD. Ekunene kukho igumbi lokutyela eliphangaleleyo elinetafile enkulu ye-oki ehlala abantu abali-10 ngokukhululeka. Ukongeza kukho indawo yokuhlala enezitulo zengalo ezijonge phantsi ukuya kwiifestile zesilingi kwilali yonke ukuya ngaseLatterbarrow. Ngasemva kwendlu kukho indawo yokuphumla / eyomileyo enemigangatho yesileyiti, umlilo ovulekileyo kunye ne-flatscreen tv. Eli gumbi likhokelela ekhitshini eline-oveni enkulu ephindwe kabini, isitya sokuhlamba izitya, ifriji enkulu / isikhenkcezisi, iwasha kunye nesomisi.
Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi okulala angama-5 anesitayile kunye ne-ensuite yokuphumla. Kukho ii-kingsize ezi-2, i-suite yosapho ene-kingsize bed kunye ne-double sofa bed kunye ne-2 superking (enokuthi yenziwe njengamawele) Kukho indlu eyahlukileyo wc.
Ngaphandle kukho igrabile drive, indawo encinci yengca, indawo ezininzi zokuhlala kunye netafile kunye neendawo zokupaka iimoto ezininzi.
*ITV ikuwo onke amagumbi okulala
*Zonke amafutha zibandakanyiwe
*Izinja eziziphethe kakuhle zamkelekile, max 2 (ithintelwe ekhitshini nakwislate floor snug)
*Ukupaka ngaphandle kwendlela yeemoto ezininzi
*Khusela indawo yokugcina ibhayisekile
*Ilinen & iitawuli zinikezelwe
4.70 · Izimvo eziyi-11
Ilali ye-honeypot yase-Hawkshead imi kumbindi weSithili seLake, ilungele ukuphonononga yonke into enokubonelela ngeSithili seLake. Ilali ngokwayo ixinene yimbali kwaye yingqokelela yezindlu ezihonjisiweyo zehagu kunye nezikwere. Kukho ii-pubs ezininzi, iivenkile zekofu, iigalari kunye neevenkile zezipho. Ipaki yokuzonwabisa yelali izinyuko ezimbalwa ezinqumla kwindlela enendawo yebhola ekhatywayo, iinkundla zentenetya, i-bowling eluhlaza kunye nendawo yokudlala yabantwana.